Akụkọ puru iche banyere nwanyi nke riri nri Oriri Nsọ naanị maka ndụ ya niile | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Naanị nri ya ka e nyere Oriri Nsọ maka afọ 53. A mụrụ Marthe Robin na Machị 13, 1902 na Châteauneuf-de-Galaure (Drôme), France site na ezinaụlọ ndị obodo, ma biri ndụ ya niile n'ụlọ ndị mụrụ ya, ebe ọ nwụrụ na February 6, 1981.
Marthe dum ịdị adị nke mmụọ ahụ metụtara Oriri Nsọ, nke bụụrụ ya "naanị ihe na-agwọ, nkasi obi, na-ebuli elu, na-agọzi, My niile". Na 1928, mgbe ọrịa na-arịa ọrịa akwara, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe omume ịkwaga, karịsịa ịmị ala n'ihi na akwara ndị ahụ metụtara.
Na mgbakwunye, n'ihi ọrịa anya, a manyere ya ibi n'ọchịchịrị gbara ọchịchịrị. Dị ka onye nduzi ime mmụọ ya, Fada Don Finet si kwuo: “Mgbe ọ natara stigmata ahụ na mbido Ọktoba 1930, Marthe adịlarị na-enwe ihe mgbu nke Passion kemgbe 1925, afọ ọ na-enye onwe ya dị ka onye nwere ịhụnanya.
N'ụbọchị ahụ, Jizọs kwuru na a họọrọ ya, dị ka Nwa Agbọghọ Na-amaghị Nwoke, ka ọ na-ebiwanye Okpukpe nke ukwuu. Ọ dịghị onye ọzọ ga-ahụ ya n'ụzọ zuru ezu. Kwa ụbọchị, ọ na-atachikwu obi n'ihe mgbu, ọ naghị ehi ụra n'abalị. Mgbe ihere ahụ gasịrị, Marthe enweghị ike ị drinkụ ma ọ bụ rie nri. Obi ụtọ ahụ dịgidere ruo Mọnde ma ọ bụ Tuesday. "
Marthe Robin nakweere ahụhụ niile n'ihi Jizọs Onye Mgbapụta na ndị mmehie ọ chọrọ ịzọpụta. Onye oke oyuyo ihe omuma Jean Guitton, na-echeta nzuko ya na onye ohu ihe a, dere: "Achọtara m onwe m n'ime ụlọ gbara ọchịchịrị nke ya, na-eche onye ọ kachasị mara ọkwa nke Chọọchị ugbu a: onye edemede akwụkwọ Anatole France (onye nkatọ nke akwụkwọ ya bụ Vatican) na Dr. Paul-Louis Couchoud, onye na-eso ụzọ Alfred Loisy (onye ụkọchukwu a chụpụrụ n'ọgbakọ nke ndị Vatican katọrọ akwụkwọ ya) na onye edemede nke ọtụtụ akwụkwọ na-agọnarị ịdị adị Jizọs mere site na nzukọ mbụ anyị, amatara m na Marthe Robin ga bụrụ 'nwanne nwanyị ọrụ ebere' mgbe niile, dịka ọ bụ maka ọtụtụ puku ndị ọbịa. N'ezie, karia ihe omimi di omimi.